J: November 2008
Technology - Robot နံက်စာ
နံနက်ခင်းရောက်ပြီဆိုတာ နိုးစက် အသံကြောင့်
မပွင့်တဲ့မျက်လုံး အတင်း ဖွင့်...
ပြီးရင် မျက်နာ ကို ရေနဲ့ပက်
င်္အကျီ စွတ်ချ ပြီးတာနဲ့
ကျောင်းသားဆိုရင် စာသင်ခန်းကို အသော့နှင်
၀န်ထမ်းဆိုရင် အလုပ်ထဲအရောက် အပြေးသွား
ကံကောင်းရင် လမ်းမှာ ဆိုင်ရှိရင် ၀ယ်သွား ရုံးရောက်မှ မနက်စာကို အလုပ်လုပ်ရင်းစား ကျောင်းသားဆိုရင် ဆရာ မမြင်အောင် မုန့်ခိုးစား အဲမှားလို့ ဆရာ စာသင်ပြီး အပြင်ထွက်မှ မုန့်စား..
အီဖေကိုယ်တို့လို အပြင်မှာ ၀ယ်မစားနိုင်တဲ့သူတွေ မချမ်းသာတဲ့သူတွေအတွက် ... တီထွင်လိုက်တာက တော့
နံနက်စာ ချက်ပေးတဲ့ စက်ရုပ်ပါတဲ့ဗျား
စာမှီး ။ ။ ဒေးလီးမေးလ်
at 1:47 PM5comments
Technology - James Bond ဖြစ်ချင်သလား -2Jetpack
Food - Welcome to Joyful Land!
ဟိုဘလော့ကြည့်လည်း အစားအသောက်။ ဒီဘလော့ကြည့်လည်း အစားအသောက် ချက်နည်း မပါဘဲ ဒတ်ပုံဘဲ ပြတော့ စာဖတ်သူတွေကို သွားရည်ကျစေတာ အမှန်ဘဲ။
ကဲလာလေရော့ ARTIST's JOYFUL LAND ကို အလည်တခေါက်လာရောက်ပါ
အောက်မှာ ပြထားတဲ့ပုံတွေဟာ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပေါင်မုန့် စသဖြင့် အစားအသောက်တွေနဲ့ တန်ဆာဆင် ထားတာပါ။
သွားရည်မကျစတမ်း ကုမဏီ ဘီလီယန် တက်
Reference : Dailymail reporter(Last updated at 10:53 PM on 24th November 2008)
Elsewhere, garlic balloons float over fields of brocolli. At first glance, they may seem like ordinary landscape paintings.
Field of dreams: The countryside landscape has broccoli for trees, potatoes for rocks and basil and herbs for the grass. The path is made from nuts, while the basket is bread withamushroom wheel. The balloons were crafted out of apple, mango,astrawberry, bananas, garlic, lemons andalime
Sugar loaf mountain: Rustic loaves form the backdrop to this alpine scene, with stilton and cheddar rocks,ahouse made out of crackers, cauliflower clouds andapath made entirely from breadcrumbs
Gone fishing: Only sustainable fish were used to create this seascape, including oysters, scallops and crabs in the foreground, mackerel and herrings for the sea itself, and pollock and sprats for the banks. Thyme stands in for trees, while the boat isamarrow withamangetout mast
A meal treat: This amazing Tuscan landscape was created using breadsticks for the cabin and cart, with ciabatta rocks, andaselection of Italian cold meats for the sky, trees and hills
Secret cave: Cauliflowers, spiky kiwano fruits, broccoli and snails can all be seen underwater, while rice and truffle pasta form the reeds. In the cave, carrots stand in for stalagtites hanging offabread rock
Pasta master: This Tuscan home is full of tasty treats, such as fresh pasta curtains and tablecloth, bowls made out of fresh tomatoes and walls created from fresh Parmesan
The big cheese: The hills are brought to life withacarved slab of cheddar, while breadsticks form the jetty and garlic cloves bob on the lake as sallboats. The steamer is made of bread withacelery funnel
Storm inateacup: The raging sea and stormy sky are made from red cabbage while the boat hull isacourgette, the wheelhouse has been formed from mangetout and the masts standing proud are asparagus
Technology - Mars အင်္ဂါဂြိုလ်
နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများ အရ အင်္ဂါဂြိုလ်သည် ရေခဲခေတ် ကာလဖြစ်နေပါသည်။ (ရာသီဥတု ပြောင်းနေတယ် ထင်တာဘဲ။)
အရင်က ရိုက်ထားတဲ့ပုံမှ ရေခဲမတွေ့ပေမဲ့ အခုပုံမှာ ရေခဲတွေ ဖုံးနေပါတယ်။ သြော် သူတို့လည်း ဆောင်းတွင်းရောက်ရှာပေ့ါ....
ပထမရိုက်သောပုံနှင့် ယခုလက်ရှိပုံတွင် ရေခဲများ ဖုံးနေကြောင်းတွေ့ရသည်။
News - Star War ကြယ်တာရာ စစ်ပွဲစပြီ
ကြာသာပတေးနေ့ ညနေ ၅နာရီခွဲ မှာကနေဒါ မြောက်ပိုင်းတနေရာရှိ ကမ္ဘာမြေမျက်နာပြင်ပေါ်သို့ ကြယ်တာရာ တစ်စင်း ကျရောက် ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။
(မှတ်ချက်။ ။ ကြယ်ကြွေပြီး ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်သက်ရောက်ပေါက်ကွဲခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ တကယ့် စစ်ပွဲမဟုတ်ပါ။ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကို နောက်ပြောင်ရေးထား ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။)
News - မျက်နာများတဲ့မောင် ခြေများတဲ့မောင်
ဒီတခါတော့ လေပေါတဲ့မောင် ပါ... ဒသဂီရိရဲ့ Genes ပါတယ် ထင်တယ်ဗျ
ဒီကြောင်က တော့ ပါးစပ်တခုထဲက ဘဲ အစာစားပါတယ်။ အော်မြည်တဲ့ အခါမှာတော့ ပါးစပ်၂ခု စလုံးက အသံထွက်ပါတယ်။ Perth, Western Australia မှာ သားဖွားသည် နဲ့ ခည။ နပ်စ်မ က Nurse Louisa Burgess, တိရိစ္ဆာန် ဆရာဝန်က George Huber နဲ အပီအပြင်မွေးတာပါ။ လူမသိ သူမသိ မဟုတ်ပါဘူး။
Mr Men or Quasi Modo လို့ နံမည် ပေးဖို့ ကြံရွယ်ထားသဗျ။ ခင်များတို့ နံမည် လေးနဲ့ မှည့်စေချင်ရင် InMyCommunity.com.au ကို ကလစ်ပြီး စုံစမ်းကြည့်ပါလား ကျနော်ပြောတယ်လို့ မပြောနဲ့
ယခုဘလော့ပေါ်တွင်ရှိသော ပုံများသည် သတင်းစာများမှ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တချို့ မှာ သဘာဝအတိုင်း ခြေများ ခေါင်းများ ခြင်းဖြစ်သော်လည်း တချို့ မှာ သုတေသနနှင့် ခြံများတွင် ပိုမို ကောင်းမွန်သော မျိုးစပ်ရာမှ သဘာဝထက်လွန်ပြီး သန္ဓေသားများ အမွှာများ ပေါင်းစပ်သွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စာရေးသူငယ်စဉ်က ဖတ်ခဲ့ရသော သိပ္ပံစာစောင်၊ သုတစွယ်စုံ နှင့် မဂ္ဂဇင်းများတွင် ထူးဆန်းသော အဖြစ်များစွာ အနက်မှ အမေရိကန်သူ မိန်းခလေးမှာ မွေးရာပါ လက်၎ဘက် ပါရှိပါသည်။ လက်၂စုံမှာ အထက်အောက် ဆင့်နေသဖြင့် ကုလားဘုရားတချို့ တွင်ရှိသော ပုံတော်များအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူမ ငယ်စဉ်အခါက အစနောက် ခံရသဖြင့် ငိုကြွေးခဲ့ရသော်လည်း အသက်ရွယ် ရသောအချိန် ဘတ်စကက်ဘော အသင်းတွင် ၀င်ကစားတွင် လက်၎ဘက်ဆုပ်ကိုင်ထားမှု့ ကြောင့် သူမလက်ထဲရှိ ဘောလုံးကို မည်သူမှ ဖြတ်ထုတ်မရ သဖြင့် သူမ၏အသင်း သည် ပြိုင်ဘက်ရှား နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပြိုင်ဘက် အသင်းများက ကန့် ကွက် သော်လည်း ဒိုင်လူကြီးများက လက်ခံသဖြင့် လက်များခြင်း ၏ အကျိုးကျေးဇူးခံစားရကာ နံမည်ကြီး လူချစ်ခင်မှု့ ပေါများ သွားခဲ့လေသည်။ သို့ သော် သူမအကြောင်းကို နက်ပေါ်တွင် ရှာဖွေမရပါသောကြောင့် စာရေးသူ၏ ပုံပြင်လေးကိုသာ ဖတ်ရှုပါလေ ဟု ပြောရပါတော့မည်။
ထူးဆန်းသော တခြားပုံများရှိသော်လည်း သံသယဖြစ်သဖြင့် မဖော်ပြပါ။ စိတ်ဝင်စားပါက http://www.freakingnews.com/Two-Headed-Animals-Pictures--1282-0.asp တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။ (2/21/08)
Health - Twin + 1 not triplet သုံးမွှာပူးမဟုတ်သော အမွှာများ
ယူကေနိုင်ငံမှ ၂၃နစ်အရွယ် Hannah Kersey ဆိုသည်သည် ထူးခြားသော သားအိမ်၂ခု ရှိသောအမျိုး သမီးဖြစ်လေသည်။ သူမ မိခင်နှင့် ညီအမများတွင် သားအိမ်၂ခုစီပါရှိကြလေသည်။
မိန်းခလေး သုံးယောက် တပြိုင်နက်မိခင်ဝမ်းထဲက မွေးဖွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သုံးမွှာပူးမဟုတ်ဘူး။
(ဓါတ်ပုံပေါ်တွင် ကလစ်လုပ်ပါက ပုံအကြီးမြင်ရပါမည်။ Photo & Reference - ဒေးလီးမေး)
သူမ၏ ပထမသားအိမ်အကြီးတွင် ၂မွှာပူးကလေး Ruby and Tilly သနွေတည်ပြီး ထိုသားအိမ် ၏ အောက်ဘက်ရှိ ဒုတိယသားအိမ်အသေးလေးတွင် Gracie မိန်းခလေးတဦး ကို တပြိုင်နက်တည်း သနွေတည်လေသည်။ ဆရာဝန်များက ကလေးများ မိခင်ဝမ်းဗိုက်ထဲတွင် ကြပ်တည်းနေသဖြင့် ကလေးတချို့ ကို ဖျက်ချရန် အကြံပေးသော်လည်း သားသမီးများ ကို မသတ်ရက်သော မိခင်စိတ်ဖြင့် သူမကိုယ်တိုင် စိတ်ပင်ပန်းမှု့နာကျင်မှု့ များကို ကြံ့ကြံ့ခံ ကာ မွေးဖွားခဲ့ပေသည်။
မိန်းခလေး၃ဦးစလုံးမှာ ၂၉ပတ် ၅ရက်ကြာ မိခင်ဝမ်းတွင်းတွင် နေခဲ့ပြီး Bristolမြို့ နယ် Southmead Hospital တွင် မွေးဖွားခဲ့ပေသည်။
Ruby and Tilly မှာ မျိုးအောင်သားဥတခုမှ သနွေ၂ခုကွဲသွားပြီး ခွဲမရအောင် ရုပ်တူသော အမွှာပူး ဖြစ်လေသည်။ ကျန်တဦးမှာ မျိုးအောင် သားဥ တခုဖြစ်သည့်အပြင် သားအိမ်သီးသန့် တွင် တည်သဖြင့် Gracieမှာ အမွှာ၂ဦးနှင့် ရုပ်ချင်းမတူပေ။
အနစ်၁၀၀အတွင်းတွင် အမျိုးသမီး၇၀ခန့် သာ သားအိမ်၂ခုပါရှိပြီး ယခုကဲ့သို့အမွှာပူးနှင့် တယောက်ကို သားအိမ် ၂ခုစလုံးတွင် တပြိုင်နက်တည်း သနွေတည်ရ်ျ မွေးဖွားခြင်းမှာ အလွန်ထူးခြားလှပေသည်။
Health - Transplant with Stem Cell
နည်းပညာ အတိအကျကို အဓိပါယ်မလွဲစေချင်လို့ ဘာသာမပြန်ထားပါဘူး။ နားလည်တာက အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဟာ လေပြွန်ပျက်စီးလို့ သူမရဲ့ Stem Cellနဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း ပြန်ပျိုးပြီး အသက်ကယ် ပေးလိုက်တယ် ဆိုတာ ပါဘဲ ။သူမမှာ ကလေး ၂ယောက်ရှိပါတယ်။ သူမ အသက်ရှင်ပါ မှ ကလေး ၂ယောက်ရဲ့ ဘ၀အဆင်ပြေနိုင်မှာ ဖြစ်လို့ ဖတ်သူအများ ၀မ်းသာမိမယ် ထင်လို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်
Mother's life transformed as doctors unveil first ever whole organ stem cell transplant in new dawn for medical science
Landmark operation: Claudia Castillo has an artificial airway created entirely from her own stem cells
A mother of two has become the first person in the world to undergoawhole organ transplant grown from her own stem cells.
From being virtually bedridden after her windpipe became blocked, 30-year-old Claudia Castillo, above, is now able to resume the active life she once had.
The breakthrough is thanks to the pioneering work of British scientists, who are hailinganew dawn in transplant surgery which they believe could revolutionise the lives of millions.
They have won an international race to be the first to use adult stem cells to grow an entire organ and implant it successfully.
They believe the technique could be extended to allow surgeons to replace organs such as the heart and the lung, and are confident it will be the normal way of carrying out transplants in just two decades.
And because the technique makes use of adult stem cells donated by the patient, it sidesteps the ethical issues around the use of embryonic stem cells.
One of the researchers, Martin Birchall, professor of surgery at the University of Bristol, said: ‘What we’re seeing today is just the beginning.
'I reckon in 20 years’ time it will be the commonest operation surgeons will be doing. It will completely transform the way we think about surgery, health and disease.
‘We believe this success has proved that we are on the verge ofanew age in surgical care.’
At present, patients having organ transplants must spend the rest of their lives on powerful drugs to suppress their immune systems, but this can leave them vulnerable to other infections and complications.
Restored: Mother-of-two Claudia Castillo can now resume the active life she had before her windpipe became blocked and left her bed-ridden
The new technique ends the need for immuno-suppressant drugs. It uses part ofadonated organ asaskeleton to grow stem cells on, but because these parts can be stored for longer than full organs, the method could save many more people and have an impact on lengthy waiting lists.
The revolutionary operation was carried out in Barcelona on Miss Castillo’s windpipe, or trachea. Scientists say up to 300 British people whose windpipes become blocked after cancer or infection could benefit every year.
They are already planning to extend the technique to the voicebox. They say this could help around 3,000 people in the UK every year whose voiceboxes are damaged through cancer and other diseases.
Claudia Castillo talks to her surgeon Paolo Macchiarini before the ground-breaking operation
After that, stem cell-grown hollow organs such as bladders and bowels could be transplanted.
Scientists hope that within 20 years all organs – including heart, liver and lung – could be grown in the lab, helping millions.
Single mother Miss Castillo had TB which had almost blocked one of her bronchi, the twin tubes leading from the windpipe to the lungs, meaning she was permanently breathless.
Part ofawindpipe froma51-year-old woman who had died fromabrain haemorrhage was used in the procedure.
The whole windpipe could not simply be transplanted as it would have been rejected by the patient’s immune system.
Instead, it was repeatedly ‘washed’ to remove all the dead person’s cells, leaving onlyacollagen ‘scaffold’.
Then stem cells were taken from Miss Castillo’s bone marrow. Stem cells can be prompted to grow into almost any type of cell, and in theory can be used to reconstruct entire organs.
British scientists are hailinganew dawn in transplant surgery
The stem cells were sent to Britain and grown inalab at the University of Bristol to produce around six million cartilage cells - the material of trachea walls.
The cartilage cells were taken to Milan where, usingamachine developed for the purpose, they were grown on to the trachea skeleton, effectively makingawindpipe in the lab.
The windpipe was cut to the right length and bent into shape, before being grafted into Miss Castillo in June by Professor Paolo Macchiarini of Barcelona University.
She is now able to walk up two flights of stairs, walk 500 yards without stopping, and care for her two children. Her body is showing no signs of rejecting the organ.
Professor Macchiarini said: ‘We are terribly excited by these results. Just four days after transplantation the graft was almost indistinguishable from adjacent normal bronchi.
Revolutionary: The new piece of windpipe that has been grown entirely from Claudia Castillo's own stem cells
‘We think that this first experience representsamilestone in medicine and hope that it will unlock the door forasafe and recipient-tailored transplantation of the airway in adults and children. We hope that these future patients will no longer suffer the trauma of speech loss, severe shortness of breath and other limited clinical and social activities.’
Details of the transplant were described in an early online edition of The Lancet medical journal.
The remarkable results have been hailed as providing crucial new evidence that adult stem cells can offer genuine solutions to serious illnesses.
Many scientists argue that taking stem cells from embryos holds more promise, because they can be triggered to create more types of body cell than adult stem cells. They are usually taken from embryos left over from IVF procedures.But pro-life campaigners say it is morally wrong to harvest stem cells from embryos because the technique kills them.
The campaigners will use the latest breakthrough to bolster their arguments that scientists should look only at adult stem cells.
Another of the researchers, Anthony Hollander, professor of tissue engineering at the University of Bristol, said: ‘This successful treatment manifestly demonstrates the potential of adult stem cells to save lives.
‘This is an example of stem cell science becoming stem cell medicine.’
A LIFE RENEWED BY RESEARCH
Virtually bed-ridden and unable to care for her children or perform the simplest tasks, Claudia Castillo facedableak existence.
Claudia Castillo facedableak existence before her surgery
Diagnosed with TB in 2004, by March this year her condition had deteriorated so much that doctors told her if she didn’t have the stem cell treatment, they would have to cut one of her lungs out, turning her into an invalid.
That wasayear after Miss Castillo, 30, left, moved from Columbia to live in Barcelona with her children, Johan, 15, and Isabella, four.
The tuberculosis had made the tube connecting her windpipe to one of her lungs collapse almost completely.
Miss Castillo left hospital ten days after the operation and has remained well.
Praising the doctors, she added: ‘Thanks to their dedication this disease can be treated and people can be made well. I feel great.
Reference : By Daniel Martin Dailymail
Last updated at 2:08 AM on 19th November 2008
at 10:26 PM6comments
Art - ရုပ်ထု
အနုပညာကို မြတ်နိုးသူများ အတွက် ၊ ကျနော်ကတော့ အနုပညာကို နားမလည်ပါဗျား
An artist Ptolemy Elrington, 43.
စာမှီး။ ။ ဒေးလီးမေးလ်
Ptolemy created this dragon, using 200 hub caps, measured 10m long, and took overamonth to build. It sold for £3,000
Ptolemy's Grenadier fish, made from hubbcap parts
A dog withasteel grip: Another hubcap design
Artist Ptolemy withahubcap sailing ship creation
Technology - Bamboo Car
ဂျပန်က ၀ါးနဲ့ထုတ်တဲ့ကား လုပ်ရင် ကျွန်တော်တို့ က ကြိမ်နဲ့လုပ်တဲ့ ကားထုတ်မယ်။
ကြိမ်လုံးကား ထုတ်လုပ်ရေး အေဂျင်ဆီ
western Japan ရှိ Kyotoမြို့တွင် ပြသ ထားသော တယောက်စီး ၀ါးကိုယ်ထည် ကား သည် အလေးချိန် ၆၀ကီလို ၂၇၀ x ၁၃၀ x ၁၆၅ စင်တီမီတာ ရှိပါသည်။ ၁နာရီ မိုင်၅၀ မောင်းနိုင်ပါသည်။
News - ရထား စီးကြအုန်းမလား
Hold on tight! Muslims pilgrims cling on toatrain leaving the ancient city of Multan in Pakistan
Sport - Football ဘောသမားတို့ အတွက် လေလံ
ဘောလုံးဝါဒနာ အိုးများ စုဆောင်းလိုသူများ အတွက် လေလံပွဲ
၁၈၉၂ခုနစ် ဘောလုံးပွဲ အစီအစဉ် ဖြတ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal ကို ၁၈၈၆တွင် Dial Square အမည်ဖြင့် ဖွဲ့ပြီး ၆နစ်အကြာတွင် မြို့အမည် Arsenalကို ပြန်ပြောင်းခေါ်ခဲ့ပါသည်။
အာဆင်နယ် အားပေးသူများ လေလံပွဲ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
အာ..... မှားသွားလို့ လေလံပွဲ ဥက္ကဌ
at 11:44 PM3comments
Food - Fruit စားရဲလား
tomato: ကြောက်စရာ့ ခရမ်းချဉ်သီး
အန် အန် အန်... မုန်လာဖြူပါတဲ့
ပြိုင်က မယ် ဒစ်စကို မုန်လာနီ
gourd, ဒိုင်နိုဆော ဂေါက်သီး (မြန်မာ အခေါ်မသိဘူးဗျ၊ သပွတ်ခါးသီး လား၊ ဗုံလုံသီးလား ထင်တာ ပြောတာ)
Bewitching: မုန်လာဖြူ စုန်းမ
တီကောင် အဲလေ C ပုံစံ သခွားသီး
လက်နက်ကြီး အာ မဟုတ်ဘူး.. လက်နီကြီး radishခေါ်တဲ့ မုန်လာဥ
Health - Twin + 1 not triplet သုံးမွှာပူးမဟုတ်သော အ...
Technlogy - Robot စက်ရုပ် ချစ်သူ
Technology - Biofuel Plant ရေနံသူဌေးတို့ တုန်လှုပ်ဖ...
Technolog - robot leg အထောက်အကူ ခြေထောက်
Technology - Robot ဘယ်သူပြိုင်လို့ တီးပါတော့နိုင်...
Technology - Flying Car ကားပျံ ဂှိန်းစဘွန်းကို ကြွ...
Funny - Animal Owl & Tree